Xarumaha Qaramada Midoobay ee Muqdisho oo ammaankooda si aan horey loo arag loo adkeeyay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Xarumaha Qaramada Midoobay ee Muqdisho oo ammaankooda si aan horey loo arag...
Xarumaha Qaramada Midoobay ee Muqdisho oo ammaankooda si aan horey loo arag loo adkeeyay
Muqdisho (Halqaran.com) – Waxaa si aad ah loo adkeeyay ammaanka xarumaha Qaramada Midoobay ee Magaalada Muqdisho, kadib weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen Xarunta Dowladda hoose ee Maamulka Gobolka banaadir.
Magaaladda Muqdisho waxaa soo gaaray Jimcihii shalay Ciidamo ka tirsan kuwa illaaliya Xarumaha Qaramada Midoobay, kuwaasi oo tiradooda ay gaareyso 625 Askari.
Ciidankaasi ayaa waxaa lagu wareejiyay ammaanka Xarumaha Qaramada Midoobay, waxaana ay sii xoojiyeen Ciidamadii horay u joogay ee ammaanka sugayay.
Arrintaan ayaa timid kadib markii Ururka Al-Shabaab ay sheegteen in weerarkii ka dhacay Xarunta Dowladda hoose loo maleegay Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya James Swan oo saacado ka hor ka tagay Xarunta dowladda hoose.
Waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Eng. Yariisow, iyadoo ay ku dhinteen mas’uuliyiin ka tirsanaa maamulka gobolka Banaadir.
xarumaha Qaramada Midoobay